HAMBALYO: Man Cty oo hanatay markii labaad xiriir ah horyaaalka Premier League & guud ahaan natiijooyinka kulammaadii la ciyaaray – Gool FM
Dajiye May 22, 2022
(Manchester) 22 Maajo 2022. Manchester Cty ayaa hanatay markii labaad oo xiriir ah horyaaalka Premier League, kaaddib markii ay guul soo laabasho ah cajiib ah kaga gaaray Aston Villa 3-2, kulankoodii ugu dambeeyay horyaalka xilli ciyaareedkan.
Qeybta hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-1 ay ku hoggaaminyay kooxda martida ahayd ee Aston Villa.
Daqiiqadii 37-aad kooxda Aston Villa ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay laacibkooda M. Cash kaddib markii uu ka caawiyay saaxiibkiis L. Digne.
69 daqiiqo kooxda Aston Villa ayaa dhalisay goolkeeda labaad waxaana 0-2 ka dhigay Coutinho oo caawin ka helay saaxiibkiis Watkins.
Daqiiqadii 76-aad Manchester City ayaa dhalisay gool waxaana 1-2 ka dhigay ciyaarta I. Gundogan kaddib markii ay caawin kaga timid saaxiibkiis R. Sterling.
78 daqiiqo Rodri ayaa dheesha k dhigay garbo siman 2-2, waxaana goolkan ka caawiyay O. Zinchenko.
Gundogan oo ay caawin kaga timid saaxiibkiis K. De Bruyne ayaa daqiiqadii 81-aad wuxuu hoggaanka u dhiibay kooxdiisa Manchester City, uxuuna ciyaarta ka dhigay 3-2.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 3-2 ay kaga adkaatay Manchester City kooxda Aston Villa oo marti ugu ahayd garoonka Etihad, City ayaa loo caleemo saaray ku guuleysiga koobka horyaaalka Premier League xilli ciyaareedka 2021/22, kaddib markii ay uruursatay dhibco dhan 93 dhibcood.
Haddaba halkan hoose ka eeg natiijooyinka dhammaan kulammadii ugu dambeeyay ee laga ciyaaray horyaaalka Premier League xilli ciyaareedka 2021/22.
Leicester City 4-1 Leicester City
Norwich City 0-5Tottenham Hotspur.